Ahoana ny fomba hampandehanana soa aman-tsara ny refort sterilization?
Mino aho fa ny olon-drehetra dia afaka mahita ny fahasalamana sy ny fahombiazan'ny retort sterilization, satria ny sakafo rehetra voatahiry dia mila mandalo fizotran'ny fanamainana, mba hiantohana ny fahasalaman'ny sakafo. Ny traikefa azo antoka amin'ny fiarovana dia ny fitaovana tokony hamboarina amin'ny valves azo antoka, fandrefesana ary ny thermometre mba hiantohana ny fiarovana, ny fahafenoana, ny fahatsapana ary ny fahamendrehan'ireo fitaovana. Amin'ny dingan'ny fampiasana dia tokony hampitombo ny fikojakojana sy ny fikajiana mahazatra. Ny tsindry fanombohan'ny valizy azo antoka dia mitovy amin'ny tsindry famolavolana ary tokony ho marefo sy azo itokisana. Mba hiantohana ireo toetra voalaza etsy ambony ireo dia mila tanterahina amin'ity fomba ity ny fomba fiasa fandefasana sterilization.
1. Tokony hosakanana ny fanitsiana tsy nahy. Ny fandrefesana sy ny thermometers dia kilasy marina 1,5 ary ny fahasamihafana ao anatin'ny elanelana diso dia normal.
2. Alohan'ny hidiranao ilay retort isaky ny mandeha, ny mpandraharaha dia tsy maintsy manamarina raha misy olona na sundries hafa ao amin'ilay retort, ary avy eo dia atositosika ao anaty retort ilay vokatra aorian'ny nanamafisany fa marina izany.
3. Alohan'ny hametrahana ny vokatra tsirairay ao amin'ilay retort dia jereo raha simba na nivoaka avy tao anaty alitara ny peratra famehezana ny varavarana retort, ary akatony ary hidio ny varavarana retort aorian'ny fanamafisana azy.
4. Mandritra ny fiasan'ny fitaovana, ny mpandraharaha dia tsy maintsy manara-maso ny toetoetran'ny fandrefesana, ny refin'ny haavon'ny rano ary ny valizy azo antoka eo an-toerana, ary hiatrika ireo olana ara-potoana.
5. Aza atosika hiditra na hivoaka ny valiny ny vokatra mba hisorohana ny fahasimban'ny fantsom-panafody sy ny mari-pana momba ny mari-pana.
6. Raha misy fanairana mandritra ny fiasan'ny fitaovana dia tsy maintsy fantatry ny mpandraharaha haingana ny antony. Ary raiso ny fepetra mifanaraka amin'izany.
7. Rehefa maheno ny fiafaran'ny asa ny mpandraharaha ary mandefa fanairana, tokony hanidy ny fanaraha-maso ara-potoana izy, hanokatra ny valizy, hijerena ny famantarana ny refin'ny tsindry sy ny haavon'ny rano, ary hamafiso fa ny haavon'ny rano ary ny tsindry ao anaty boiler dia aotra. Avy eo sokafy ny varavarana mamaly.
8. Voarara tanteraka ny fampandehanana ilay masinina misy aretina. Raha misy ny olana dia ampahafantaro ny mpiasa amin'ny fikojakojana ny fitaovana ara-potoana. Voarara tanteraka ny famongorana sy ny fitazonana ilay milina tsy misy alalana.
9. Rehefa manadio sy manosotra ny fitaovana, ny efijery fampisehoana dia tsy maintsy arovana mba ho azo antoka fa maina sy tsy misy rano ny efijery fampisehoana.
Fotoana fandefasana: Mar-22-2021